Indlela uHeikin Ashi, Amakhandlela Averaged, Angakusiza Ukugwema Umsindo Emakethe Ezingaphambili? Ibhulogi ye-FXCC
I-Oct 31 • Ukuthengiswa Kwama-Forex Izihloko • Ukubuka kwe-26948 • 4 Amazwana Indlela uHeikin Ashi, Amakhandlela Averaged, Angakusiza Ngayo Ukugwema Umsindo Emakethe Ebikezelayo
Kunezinhlobo eziningi zama-candlestick candiststi ezizokhipha amkhandlela kaHeikin-Ashi; ilula kakhulu, idukisa futhi kwezinye izimo zithandwa. Isikhalazo esivame kakhulu ukuthi i-HA igqoke ngokuqhathanisa ngokuqondile namakhandlela aseJapane nokuthi lokho kudala kubangelwa ukungena ngemuva kokufuna isenzo senani. Iphikisana lokuphikisana kuyoba ukuthi okufana nazo zonke ezinye izinkomba ze-HA kufanele zisetshenziswe ngokuhlanganyela nezinye izindlela zokuhlela futhi zisetshenziswe ngendlela efanele (ngaphakathi kwemigomo yokusetshenziswa kwayo okuhloswe) ukuqinisekisa ukuthi abathengisi bathola okungcono kakhulu kwikhombisi.
Kufanelekile ukuhlala ngokugxeka okuyinhloko okwesikhashana, okushiwo ukuthi kukhona ukukhishwa kwemali. Nakuba akungabazeki ukuthi kukhona okufanelekile kulokho okuvezwe ngokuthi 'iphutha' I-HA ivame ukukhuthaza umthengisi ukuba ahlale nomkhuba kuze kube sekupheleni, kanti ngenkathi isenzo sokugxekwa kwentengo sithengiswayo, sake sangena ekuhwebeni ngokusebenzisa i-HA ukujwayela kaningi kunokuba kungenakwenzeka ukuba khona futhi hhayi amanga. Amanye ama-phenomena angaphansi kakhulu ukusebenzisa i-HA, isibonelo, ama-whipsaws anikezwe ukuthi i-HA ingenye yamathuluzi amahle kunawo wonke atholakala ekuhlungeni umsindo wemakethe. I-HA ingenye yezindlela ezicacile zokubonisa izitayela nokuguqulwa kuyatholakala. Ngokufanayo namashadi a-Ichimoku, i-Heikin Ashi yayiyithuluzi lokuhweba elingaziwa engaziwa kanye nenani lentengo esanda kujabulela ukunyuka kwendabuko, naphezu kokufinyeleleka kusukela ekusungulweni kwayo eminyakeni engamashumi amabili edlule. Ukuthi ukuqwashisa nokwenyuka komphakathi kungase kube ngenxa yokusakazeka kwenketho ye-HA kumaphakheji amaningi we-charting.
Ngokungafani namakhandlela avamile aseJapane, u-Heiken-ashi akachazi ukuthi: evulekile, ephezulu, ephansi futhi evalekile kwikhandlela ngalinye. Esikhundleni samanani amanani abalwa esikhwameni ngasinye esisekelwe ebusweni obukhulu emakethe besebenzisa izinsiza. Isibonelo, uma abathengisi bebala ngokucacile, izibani zezibani ze-Heiken-ashi zizoba yi-bearish, ngisho noma ibha yamanani ivala ngaphezulu kunalokho evulekile. Lezikhandlela ze-Heiken-ashi ziyikhomba eliphelele labathengisi abathanda ukulandela imikhuba yabo ngokugcwele. Ukubukeka kuka-Heikin-ashi okulula kwenza izitayela zilula ukubona futhi ngenxa yezimo eziningi kulula ukwenza izinqumo.
Abathengisi abanokuhlangenwe nakho bayakwamukela ukuthi iningi lezinzuzo zabo likhiqizwa lapho izimakethe zihamba, ukubikezela izitayela ngokunembile ngakho-ke kubalulekile. Abathengisi abaningi basebenzisa amashadi okukhanyisa amakhasi ukuze abasize bathole izitayela ezinjalo phakathi kokungabonakali kwemakethe okungaqondakali, ikhono le-HA lokuhlunga umsindo ngenye yezinzuzo zayo ezinkulu ngaphezu kwezinkomba ezinamanani. Inqubo ye-Heikin-Ashi, okusho ukuthi "ibha yokulinganisa" ngesiJapane, ngokungangabazeki kusiza ukuthuthukisa ukuhlukaniswa kwemikhuba.
Kunezinhlelo eziningana ezilula ne-HA ezinikezela izibonakaliso, usizo lokukhomba amathrendi ngakho-ke amathuba okuhweba:
Amakhandlela angenalutho angenazo izithunzi eziphansi abonisa ukuqina okuqinile. Amakhandlela aphikisiwe abonisa ukuphakama
Ikhandlela elilodwa elinomzimba omncane, elizungezwe izithunzi ezisenhla nangaphansi, kuyisibonakaliso esinamandla sokushintsha kwesimo sengqondo
Amakhandlela agcwalisiwe abonisa i-downtrend
Amakhandlela agcwalisiwe angenazo izithunzi eziphakeme abonisa ukuqina okunamandla
Lokhu kulula ukubona izibonelo zokubunjwa kwamakhandlela kalula nezibonakaliso kubonisa ukuthi izitayela ezikhomba kanye namathuba okuhweba kungaba lula kakhulu ne-HA. Izitayela azivame ukuphazanyiswa ngamasignali amanga futhi ngenxa yalokho kulula ukubona. Ukusebenzisa lezi zakhiwo zamakhandlela ezilula zezimakethe ezintathu eziyinhloko esizibhekayo ukuze sikhule njengoba abathengisi beqondile; Izimo ze-bullish, ze-bearish nezishintshayo zihlanganisiwe lapha.
Ukukhangisa Amakhandlela Okunyanyisa
Lapho imakethe ishushuthuka, amakhandlela kaHeikin-Ashi anemizimba emikhulu kanye namathunzi angaphezulu angaphezulu kodwa akukho shadow ephansi, izibonelo zizobonisa lokhu. Cishe zonke izikhandlela zinemizimba emikhulu, izithunzi ezinde kakhulu futhi akukho shadow ephansi.
Ukukhangisa amabhandlela e-Bearish
Lapho imakethe i-Bearish, amakhandlela kaHeikin-Ashi anemizimba emikhulu nemivubelo emide engaphansi kodwa akukho shadow, izibonelo zizobonisa lokhu. Cishe zonke izikhandlela zinemizimba emikhulu, izithunzi eziphansi kakhulu futhi akukho shadow ephezulu.
Ukuguqula amakhandlela kumashadi we-Heikin-Ashi kubonakala njengamakhandlela e-Doji. Abanakho noma izidumbu ezincane kakhulu, kodwa izithunzi ezisenhla nangaphezulu.
U-Heikin-Ashi ufanelekile ukuhweba wonke ama-pair of currency, abahwebi abaningi bathola amaphuzu ahlukumezayo afana ne-GBPJPY ne-EURJPY okulula kakhulu ukuhweba usebenzisa i-HA. Kungaba yisibonakaliso esinokwethenjelwa kakhulu sokuhweba kwe-intraday nokukhwabanisa kuzo zonke izikhathi eziphansi ezinjenge: 15min, 5min ne-1min. Kodwa-ke, izinzuzo eziyinhloko zingasetshenziswa kakhulu ekubhekeleni ezindleleni zokuhweba kuzo zonke izikhathi eziphakeme njengezikhathi zansuku zonke namahora angu-2-4. U-Heikin-Ashi uyithuluzi lokuhweba elihle kakhulu labathengisi abasha. U-Heikin-Ashi angakhuthaza ukubekezela kwabadayisi ukukhuthaza ukuthi kube nokuhleleka kokuhlelwa kwezentengiselwano zokuhweba ezinikezwa ikhono layo lokuqeda umsindo wemakethe.
Ngokungeziwe ekuboniseni amandla esihlobo somkhuba HA kubonisa amaphuzu okushintsha okuyinhloko esenzweni senani futhi uphenduka ngendlela efana nesilinganiso esihambayo. Ukufaka umsebenzi weseshini kwisibani esisodwa (ukuvuleka, ukuvala, ukuphakama, nokuphansi), i-HA igxilile ukushintshashintsha okungaqondakali ezimakethe zemali futhi iqede ama-spikes angase avezwe ukungazwakali noma ukungena ngokungazelelwe emanani, ama-chartists aqinisekisiwe futhi azinikele kaningi thola isithombe esicacile somsebenzi wamakethe futhi ngaleyo ndlela ungenza izinqumo ezengeziwe zokuhweba.
U-Heikin Ashi ubhebhezela ngoba esikhundleni sokusebenzisa okulula futhi okuphakeme kweseshini ukubala amakhandlela ngamanye, u-Heikin Ashi uthatha amanani ngamabha ngayinye kanye nemingcele yabo ukuze bakhe iseshini "elula". Lokhu kuyisisekelo ekusetshenzisweni kwayo okuphumelelayo njengoba izimakethe zemali ikakhulukazi zivame ukuhlinzeka ngokweqile nokumaketha komakethe kunakwamanye izimakethe. Ngokusebenzisa ifomula echazwe ngaphambilini esimweni ngasinye sokuhweba ngasinye ukwakha amakhandlela okulandelanayo, ishadi le-HA libonisa kakhulu isinyathelo samanani esisekelo;
I-Heikin Ashi Ifomu
Vala = (Vula + Phezulu + Phezulu + Vala) / 4
Vula = [Vula (ibha yangaphambilini) Vala (ibha yangaphambilini)] / 2
Okuphezulu = Max (Phezulu, Vula, Vala)
Iphansi = Min (Ephansi, Vula, Vala)
Ngalesi sefomula i-HA ihlukanisa amanani ngenkathi ingabandakanyi ukungahambi kwemali emakethe nomsindo. Iphethini eliholayo aliniki nje kuphela umthengisi umbono ongabonakali ngokwengeziwe kepha ongasiza ekuboneni umkhuba jikelele. Ngesithombe esisheshayo, ngokusobala ukuthi kulula kakhulu, abathengisi bangathuthukisa ukuhweba umkhuba jikelele ngokuhlanganisa iHeikin Ashi nezinye izinkomba. Njenganoma yisiphi esinye ishadi lesicelo, kunconywa ukuthola ezinye izinkomba ezingase zithokozise isitayela sakho sokuhweba lapho ufaka isicelo se-HA. Lokhu kuzosiza abathengisi ukuba baqinisekise ukungena kwemakethe, ukusiza ukukhomba ukufakela okucacile, ukwesekwa nokuphikiswa futhi unikeze ngokuqinisekiswa okunye okusemandleni okuhweba ukuthi kube nenzuzo.
Ngesikhathi abanye abathengisi behamba kusuka ezintanjeni zamakhandlela zaseJapan kuya kubadayisi abaningi abanokuhlangenwe nakho bangase basikisele ukufeza inqubo ye-HA kuqala. Njengoba kukhonjisiwe kulesi sihloko ehlomile ngokwazi ukukhomba ngokukodwa ukuklama okune kuphela kanye nemicimbi emithathu yemakethe eyinhloko kufanele unikele umthengisi we-HA ngokwanele ukuthi enze izinqumo ezisekelwe futhi ezinolwazi. Amasu we-HA angamkelwa ngokusheshisa ngokuqhathanisa ngqo nenqubo yokufunda ehilelekile ezintikeni zasekhandlela zaseJapane.
izinkomba zangaphambiliikhandlela le-heikin ashi
« Okwenza Ukuhweba Ngokumelene Nekhwalithi kufana nokukhweza ama-pennies ngaphambili kwe-Steam-Roller Ukukhuluma ngokufanelekile nokugxila ngesikhathi sokuhweba FX »